फिरऊनले 'Shararame मा उठ्नु कसरी विवरण "
आज हामी तपाईंलाई देखाउने छौँ कसरी फिरऊनले "Shararame" उठाउनका लागि। तपाईं सफल भने, तपाईं आगो, तूफान वा मिश्र शासक हुनेछ। यो जादुई शक्ति तपाईं एक पटक प्रत्येक अन्य उठ्दै देखि लाग्न सक्छ, तर हरेक हप्ता ध्यान दिनुहोस् महत्त्वपूर्ण छ।
हामी फिरऊनलाई 'Shararame "मा उठ्नु कसरी निर्णय को व्यावहारिक भागमा अगाडि बढ्नुहोस्। हामी मिश्र मा एक आमा छ रुचि हो। तसर्थ, पहिलो हामी यो देश भ्रमण गर्न एक भिसा प्राप्त। यात्रा को लागि ट्रक छनौट। यो एक सडक कार मा जाने सबै भन्दा राम्रो छ। तपाईं सीधा "Shararame" मा मुद्दा, समाधान गर्न अघि फिरऊनले उठाउनका, धेरै मिनी-खेल सहभागी छन्। उदाहरणका लागि, एक pitcher द्वारा थोपाहरूद्वारा संकलन गर्न।
अब, धेरै छोटकरीमा फिरऊनले "Shararame" कसरी जगाउन गर्न वर्णन गर्नुहोस्। छ देवी प्राप्त आदेश पूरा गर्न आवश्यक आवश्यक परिणाम हासिल गर्न। लक्ष्य टाढा छैन फिरऊनले को मुर्ति बाट, एक विशेष क्षेत्र मा अवस्थित छ। कार्य गरेको छ गरेपछि, हामी पुनरुद्धार लागि फिरऊनले देखि मूल्यांकन प्राप्त हुनेछ।7दिन, उहाँले हामीलाई जादुई शक्तिहरु दिनुभएको छ। पहिलो हामी देवी Bast आनन्द निर्देशन कार्यान्वयन। यो गर्न, stroking बिरालोहरु र कुकुर देखि सावधान रहन। सत्यको देवी - अर्को, हामी को Ma'at कार्य मार्फत जानुहोस्। गर्न यो फूलदान जसमा लुकेका पुस्तक निर्दिष्ट गर्न आवश्यक हुनेछ। आकाश देवी - अब हामी सुपारी देखि काम प्राप्त। बादलसँग टक्कर परहेज गर्दा तारा प्रकाश हुनेछ। अर्को देवी Sekhmet छ। उनको लागि, हामी सूर्य फसाउन छ। अर्को - प्रजनन देवी Isis। हामी सर्प मिति खुवाउन छ। पछिल्लो क्रममा चिस्यान को देवी Tefnut हुनेछ। pitcher शुद्ध पानी थोपाहरूद्वारा संकलित। यो स्रोत सुन माथि बेशकीमती मरुभूमिमा छ। देवी काम गरेको छ, अब तपाईं जीवनको लागि कल गर्न चिहान, आमा प्रविष्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईं फिरऊन "Shararame" कसरी जगाउन थाहा।
जंगल Minecraft मा अस्तित्व: शुरुआती लागि सुझाव
सबै भन्दा राम्रो ड्राइभिङ सिमुलेटर - परीक्षा लागि तयारी मा सही सहायक!
कसरी "Varfeys" परिवर्तन पासवर्ड विवरण
को कौशल बृद्धि गर्न कौशल मा "Skyrim" मा धोखा,
"Maynkraft" दोकान कसरी - एक भवन निर्माण!
कसरी BIOS मा जानुहोस्
ड्राइभिङ वा ब्रेकिंग गर्दा किन स्टेरिड़ हिट?
Moser कचरा: म्यानुअल र समीक्षा
"YWAM-सम्पत्ति": ग्राहक समीक्षा र कर्मचारी
एक चालक अनुमतिपत्र प्रतिस्थापन गर्न कागजातहरू
एक माछा मार्ने जूता कसरी चयन गर्ने?
"सैनिक": अभिनेताहरु र श्रृंखला को भूमिका। के अभिनेता "सैनिक" टिभी श्रृंखला मा तारा अङ्कित?
रिबन यार्नबाट स्कार्फ - यो कस्तो हुन्छ फैशन?